घर फुटबल प्रबन्धक मरिजिओ सरी बालिका स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
अन्तिम अपडेट गरिएको जनवरी 30, 2019
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रबन्धक प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नामले उपनाम "मिस्टर 33"। हाम्रो मरिजियो सरी बालबालिकाको कथा प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई तपाईंको बचपनको मिति सम्म ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले नापोलीमा आफ्नो इतिहास बारे जान्दछन्। तथापि, केवल एक हातमा केही प्रशंसकहरूले मरिजियो सरीको बायोलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
मरिजियो सर्री बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
मरिजियो सरि जनवरीको 10 को 1959th दिनमा उनको आमाबाबु, श्री र श्रीमती अमिगो सरीलाई नै नेपल्स इटालीको बगुनोली जिल्लामा जन्मिएको थियो।
मरिजियो सरिस आफ्नो पिताको नेतृत्वमा मध्य-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ जुन एक पटक इटालियन स्टील कम्पनी इटलसाइडका निर्माण कार्यकर्ता थिए। तिनी इटालीको फ्लोरेंस प्रांतमा स्थित फिगेलाइन वाल्डोर्नो सहरमा उठाइयो।
एक बच्चाको रूपमा, सररीले दुवै शिक्षामा र फुटबल खेलिरहेका थिए। उनको परिवारको लागि शिक्षा पहिले आएको थियो। साराले कडा अध्ययन गरे र अन्ततः लोकप्रिय संग बैंकर बन्नुभयो Banca Monte dei Paschi di Siena (तल चित्रित) इटली, टुस्किनीमा।
एक बैंकरको रूपमा, उनले आफैं अझै पनि आफ्नो बैंकिंग कामको बीचमा बहुसंख्यक भेट्टाउन र शौकिया फुटबल खेल्दै भेट्टाए। लुम्बिनीले यो सर्रीको बैंकिंग कार्य हो जसले उनलाई इटलीबाट बाहिर लैजान्छ जहाँ उनले लन्डन, ज्यूरिख र लक्समबर्गको आफ्नो बैंक शाखामा काम गरे।
फुटबलको भक्तिको बावजुद, मोजिज्ओ सरीको शौकिया फुटबल खेल्नको जुनसुकै नसोचेको कल्पना मात्र थियो। त्यसपछि त्यसपछि, सररी बिहान बैंकमा काम गर्थे र दोहोरो र साँझमा केही शौकिया टीमलाई प्रशिक्षक बनाउथे।
मरिजियो सर्री बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बैंकिङ छोड्दै
1999 मा, 40 को उमेर मा, मरिजियो सरी ले आफ्नो सम्पूर्ण काम गरेर को फुटबल कोचिंग को लागि समर्पित गर्न को लागि आफ्नो बैंकिंग नौकरी छोडने को निर्णय लिया। त्यहाँ उनको बैंकिंग सहयोगीहरू द्वारा व्यवस्थित एक विदाई पार्टी थियो जुन तल फोटोमा हेर्नुहोस्।
आफ्नो बैंकिंग नौकरी देखि अफर सेवानिवृत्ति, सर्री ले भन्यो कि त्यो फुटबल खेलन को लागि धेरै पुराना थियो। दुःखको कुरा, तिनले एक पेशेवर क्यामेरा खेलिरहेको छुट्यो। इटाली मोंटे स्यान सविन्टो, इटाली मा स्थित एक कम लेग क्लब एसी सनसोभिन फुटबल क्लब कोच गर्न को लागी सरेरी इटाली फर्कियो। वर्ष 1990 देखि 1999 को बीच, मरिजिओ सरी बैंक देखि सेवानिवृती देखि पहिले, उनले6टीमहरु लाई प्रबंधित गरेको थियो; Stia, Faellese Cavriglia, Antella, Cavriglia र Tegoleto।
मरिजियो सर्री बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
40 को एक पक्कै पुरानो उमेर मा, मौरीजियो सरी फुटबल प्रबंधन मा सबै अनुभव प्राप्त गरेको थियो। उनी धेरै क्लबहरू द्वारा प्रबन्ध गरिएको थियो जसले प्रबन्धकको रूपमा व्यवस्थापन गर्यो जसले कुनै प्रश्नहरू सोध्दैन र ट्राफिक वार्तामा संलग्न हुन सक्दैन. श्री 33 सधैं भएको छ सरीको उपनामले सेट-टुक्रा routines को संख्याको कारण उनले सधैं खेलाडीहरूलाई प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे। 2000 देखि 2015 को बीच, मौरीजियो सरी 10 टीमहरु को प्रबंधन को समापन को शुरुवात को शुरुआती समय देखि नै नैपी द्वारा भनिन्छ जहां उनको आखिर नै आफु को नाम ले गयो।
रोमन अब्रामोविच त्यसोभए उनीहरु आफुले आफुलाई आफुले आफुलाई आफुलाई माया गर्न चाहन्थे। यसैले, सरी चेल्सी को 13th स्थायी मालिक बन्यो Abramovich को स्वामित्व जुन जून 2003 मा सुरु भयो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
मरिजियो सर्री बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
लोकप्रिय स्टामफोर्ड ब्रिज हट सिट लिनुभन्दा अघि, सरी इटाली रिवेरामा एक मोहक र शान्त जीवन बिताउँथे र उनको प्यारा नातेदार मरीना मरीनाको छोरा र कुकुरसँग। उनको पत्नी, मरीना (तल चित्रित) विशेषता ड्राइभिङको शौक हो तिनको इटालियन ग्रामीण इलाका वरपर।
ग्रामीण क्षेत्रमा वरिपरि लामो लामो ड्राइभ लिनको लागी, सररीले खेलको बारेमा सोच्न कहिल्यै सकेन।
इटालियन रिवेरा, स्थान सर्री, उनको पत्नी र छोरो इटाली मा बस्न थालेको स्थान मा भूमध्यसागरको आकारको पट्टी हो जुन फ्रान्स र टुसेनीको दक्षिणी बीचको बीचमा छ।
यस गैर-शहरी नेपल्स स्थानमा, मरिजियो सरीको व्यक्तिगत जीवन साँच्चै शान्त छ र तिनकी श्रीमती र छोरासँग क्यामेराबाट टाढा छ। उनको चेल्सा सहभागिता अघि, मरिजिओ सरी को परिवारले तिनको रूपमा हेर्छ जुन फुटबलको रूपमा फुटबल फ्रेम गर्न संघर्ष गर्दछ। सरी आफैले यसलाई राख्छन्
"जब म प्रशिक्षण सत्रको नेतृत्व गर्न जान्छु, म कहिलेकाहीं मेरो परिवारलाई भन्छु: 'म काम गर्न जाँदैछु,'"
उनले अखबार Avvenire लाई भने।
"म मजदुरहरूको परिवारबाट आउँछु, र यदि मैले फुटबलमा बलिदानको बारेमा कुरा गरिरहेको छु भने, म पागल हुन्छु।"
"म हरेक खेल गर्नु भन्दा राम्रो रमाइलो मनपराउन चाहन्छु, त्यसैले म उत्तिकै थिएन। मैले मेरी पत्नी र छोरालाई मेरो सबै विजयलाई समर्पण गर्दछु "
मरिजियो सर्री बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -धूम्रपान तथ्यहरू
मरिजियो सरी को रूपमा अनलाइन मिडिया द्वारा वर्णन गरिएको छ क्यान्सर-धूम्रपान मावरिक जो कथित रूप देखि धूम्रपान गर्न को लागी एक दिन 60 सिगरेट एक बोली मा आफ्नो तनाव मा कटौती।
अब प्रश्न अधिकांश प्रशंसकहरू सोध्न चाहन्छन्; Hजस्तै मौरिजियो सरी खेलकुदको समयमा कहिल्यै स्वादमा परेको छ?. जवाफ "हो!"। स्टेडियममा धूम्रपान गर्ने ठाउँको साथमा सरी अझै पनि धूम्रपान गर्दछ, यो समय प्रयोग गरेर सिगरेट फिल्टर जस्तै खेलहरु को समयमा तल देखिए
2018, नापोलीको यूईएफई यूरोपा लीग विरोधीहरू, आरबी लेपिज्गले आफ्नो स्टेडियमको लकर-रूम क्षेत्रमा विशेष धूम्रपान सेक्शन निर्माण गरे जुन खेलको समयमा धेरै सिगरेटको रूपमा देखा पर्दछ।
Dries Mertens एक पटक अनुमान गरेको छ कि माथिको प्याकेट को पाँच मा सरी दैनिक दैनिक उपभोग। स्मरण गर्नुहोला, सररीले कफी पनि मन पराउँछन्। मा नेपल्स, उनले क्लबको पसलपागीको साथमा उनीहरूलाई प्रशिक्षणको दौडान एक नयाँ एस्प्रेसो ल्याए र दिनहुँ ब्रेकहरू भेट्थे।
मरिजियो सर्री बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -फेल-मोआउट
सरीले क्यामेरामा लेख्ने र पत्रकारहरूलाई घृणित प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ वा तिनको सहमति बिना साक्षात्कारको लागि उनको टक्करबाट घृणा गर्दछ। आदर्श रूप मा, त्यो थाहा छैन कि कसरि उनको बयान को बारे मा राजनयिक हुन को लागी। यसको बावजूद, उनी सधैँ पत्रकार र प्रशंसकहरूले सधैं क्षमा गरेका छन्। एक जना पत्रकारले एक जना पत्रकारलाई जोर दिएर जवाफ दिए जुन शब्दहरु द्वारा जान्छ;
तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ, तपाई राम्रो हुनुहुन्छ, त्यसैले म तपाईलाई एफ ई बन्द गर्न भन्नेछु! '
यो एक महिला पत्रकारले सामना गरिसके पछि मरिजियो सरीर गैर-राजनयिक फैशनमा प्रतिक्रिया दिईएको छ। निषेधित भाग लिनको लागी, मरिजियो सरी उनको अनावश्यक टिप्पणिहरु पछि तुरुन्त माफी माग्यो। फेल-मोआउट गरिएको कुराकानी आयो किनभने तिनी नापोलको 0-0 पछि अन्तर स्यान सियोरोसँग आकर्षित भयो। यसले उनको टिमलाई पहिलो स्थानमा बनाइयो जुनसुकै माथि जर्नलस उचाईको बिन्दुमा एक अंकले माथि राख्यो।
उनको भ्रामक प्रतिक्रिया अघि, महिला पत्रकार वास्तवमा उनलाई यो प्रश्न सोध्नुभयो;
"मैले तपाईलाई सोधें कि तपाईंको तर्कको बारेमा तपाईले परिणाम सन्तुष्ट भएमा, म टेबलमा तल जानेको सन्तुष्टि बुझ्न सकिनँ। कृपया सम्झाउनु होस्"
मरिजियो सर्री बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -Conte Replacer
तपाईंलाई थाँहा थियो??, यो पहिलो पटक होइन कथा मरिजियो सरी द्वारा बर्खास्त गरीएको छ र तपाईले चेल्सी एफसी परिप्रेक्ष्यबाट थाहा पाउनुहुनेछ। तर उहाँको सामु धेरै प्रबन्धकहरू जस्तै, कथा चेल्सीको बोर्डसँग सभ्य काम सम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित गर्न असमर्थ भयो। आदर्श रूप मा, उनीहरु लाई कथित खिलाडिहरु संग काम गर्न को लागी मजबूर भएको थियो उनले मांगी थिएन।
त्यसै पछि कथा मा निस्क्रिय थियो क्यालिकोपोली म्याच-फिक्सिङ स्क्यान्डल 2006 मा (जो जाउभाउभसलाई देखाइएको देखियो), इजोजो मा आफ्नो पहिलो कोचिंग नौकरी राख्ने काम जो दोस्रो इटालियन विभाजन मा थियो कभी हात मा छह-प्वाइंट को दंड संग कभी आसान नहीं रहयो थियो। सौभाग्य देखि, क्लब अध्यक्ष पियू मनसिनीले आफ्नो खोज अनुभवी प्रबन्धक को लागी शुरु गरे। एन्टोनियो कन्टा हटाइएको थियो र सरेरी उनको स्थानमा ल्याइयो। क्लबको आशा र अस्तित्व अहिले सररीको नाममा थिए। दुर्भाग्यवश, यो धेरै समयमै ढिलो भएको थियो, अजजो भर्खरै रिग्लुड गरिएको थिएन तर दिवालियामा गयो र कहिल्यै पनि बरामद गरेन।
मरिजियो सर्री बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पुराना पुरानो
मरिजियो सरिलाई पुरानो प्रविधि प्रबन्धक र टेक्नीशियनको रुपमा हेरिएको छ जुन उनीहरूको प्रशिक्षण सत्रको भागको रूपमा व्याख्यान गर्दछ। उनको मुख्य साँझका विषयहरू समावेश छन्; "स्थिर बलहरू, कुना र फ्री-टिक योजनाहरू"
तल फुटबल प्रबन्धकको रूपमा आफ्नो प्रारम्भिक वर्षको दौडान मरिजियो सरी आफ्नो खेलाडीहरू व्याख्यानको तस्बिर हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मरिजिओ सरिको बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.